Matetika dia misy olona mieritreritra ny zava-misy amin'ny fiainana andavanandro dia mampiasa karazan'olona marobe isan-karazany izay manatsotra tanteraka ity fiainana ity. Eto, ohatra ...
Ny fampiharana azy dia be dia be ary, azo lazaina, ny universe rehetra - dia azo ampiasaina ny gorodona ao an-tokotany sy ho toy ny rindrina eny an-dalambe. Saingy, ny rehetra araka ny filaharany. Voalohany indrindra, ny gidro fingotra dia ampiasaina betsaka amin'ny efitra fandroana . Mahazo aina izy ireo amin'ny maha-matihanina azy. Ary satria karazana loko (mats) toy izany dia manana karazana loko isan-karazany.
Ho an'ilay tanjona tahaka izany, dia azo ampiasaina amin'ny rihana vita amin'ny raki-pandrika ny plastika misy sobika. Ankoatr'izay, misy ny endrika fanodikodin-dàlana toy izany.
Tena azo ampiharina amin'ny fampiasana mudguards amin'ny toeram-pandaharam-bary ho an'ireo toerana voaro toy ny lalantsara, indrindra any amin'ny tranon'olon-tokana. Ao amin'ny lalantsara ao amin'ny trano dia afaka mametraka gorodona fingotra ianao. Nataon'izy ireo tamin'ny fomba fofona avy amin'ny fantson-kiran-tanana manify mafy, ny làlana toy izany dia manadio ny vovoka amin'ny kiraro, manangona azy ao anaty, ary miaro ny tany amin'ny tsy fahampian-tsakafo. Fa na dia amin'ny "asa goavana" toy izany aza, dia mitazona ny endriny izy ireo mandritra ny fotoana maharitra, ary raha ilaina dia mora diovina izy ireo ary manasa ny tenany mihitsy aza.
Ny fako vita amin'ny rongony dia ampiasaina matetika hanamboarana teti-trano, ohatra, mba hanamboarana lalana zaridaina. Mba hanaovana izany, dia ampiasao plastika manokana vita amin'ny fanodinana kodiarana fiara ampiasaina. Ireo solaitra ireo ihany koa dia afaka mametraka faritra fialam-boly na kianjan'ny ankizy. Manana karazana fiasa manokana (ny tsy fahampian'ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fivoahan'ny rivotra, ny fanamafisana ny fahamendrehana sy ny fanodinkodinam-bidy, ny fanamorana ny fametrahana), ny lalan-doko ho an'ny trano fialofana dia fomba tsara kokoa ho an'ny lalana mihetsiketsika.
Fiasa any ivelany
Lanitra ho an'ny tafo rindrina
Ahoana ny fomba hanamboarana ny lavarangana amin'ny tananao?
Inona avy no ambony kokoa ao amin'ny lakozia?
Fan on feng shui
Efitra ao an-trano
Sokafo vita amin'ny biriky miaraka amin'ny tanana
Toby ambony vita amin'ny jono - ataovy izany
Vato fotsy ho an'ny orinasa manda
Tena mahafinaritra ny manantona sary eo amin'ny rindrina?
Lozam-pifamoivoizana eny amin'ny lalantsara
Inona no manjo ny fanalàn-jaza?
Poliomyelitis amin'ny ankizy
Timothy Dalton sy Oksana Grigorieva
"Milky Way" ho an'ny fihenam-bidy
Famerenana ilay boky hoe "Mitepo ny tenanao!" John Norcross, Jonathan Norcross ary Christine Loberg
Cage ho an'ny chinchilla amin'ny tanany manokana
Ny fomba hanamboarana holatra boletus - ny hevitra tsara indrindra ho an'ny holatra dibera
Ny soatoavin'ny tanora ankehitriny
Ahoana no hipetrahan'ny fizarana lavaka?
Famerenana ny fandroana amin'ny acrylic
Biby vita amin'ny voan-kafe ao anaty tsiro - ahoana no fomba hanomanana sakafo matsiro sy malefaka?
Ny legioma eo amin'ny giro
Anna Sedokova dia nanjary zava-baovao avy amin'i Antonio Banderas
Inona no mahatonga ny olona ho matanjaka kokoa?
Mikroskoopy ho an'ny mpianatra